पैसा कमाउन नसकेर तनावमा हुनुहुन्छ ? एक मुट्ठी चामलबाट यसरी पाउनुहोस् चमत्कारीक लाभ – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/पैसा कमाउन नसकेर तनावमा हुनुहुन्छ ? एक मुट्ठी चामलबाट यसरी पाउनुहोस् चमत्कारीक लाभ
त्यसपछि ती दानालाई भगवानमा समर्पित गर्नुस् । मैले चढाएको दाना स्वीकारेर मेरा कष्टहरू दूर गर्नुस् भन्दै प्रार्थना गर्नुस् । तपाईं जागिर खोज्दै हुनुहुन्छ वा तपाईंलाई अफिसमा कुनै समस्या छ भने चामलको खीर बनाएर कागहरूलाई खुवाउनुस् ।
केही दिनमै समस्या समाधान हुन्छ। पैसा कमाउन नसकेर तनावमा हुनुहुन्छ भने आधा किलो चामल लिएर एकान्तमा शिवलिंगको अगाडि बस्नुस् ।शिवलिंगको पूजा गरेर एक मुट्ठी लिंगमा चढाउनुस् र बाँकी चामल चाहिँ गरीबगुरुवालाई दान दिनुस् । पूर्णिमापछिको सोमवार यसो गर्नुस्।
जिन्स पाइन्टमा किन हुन्छ ठूलोसँगै सानो गोजी?यस्तो छ धेरैलाइ थाहा नभएको रोचक तथ्य एवम् वास्तविकताहरु यस्ता छन्